NYI LYNN SECK 18+ DEN: Scenarios
Posted by NLS at 10/13/2010 01:50:00 AM
21 Responses to “Scenarios”
ထိချက်များတော့ ဘုထွက်သဗျာ။ မှန်လိုက်တဲ့ ပစ်ချက်တွေ။ လက်တည့် မတည့်ကတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပဲ။
ဆရာ အော်ပီကျယ်ရဲ့ စကားနဲ့ ပြောရရင်
ထောင့်ကန် ဘောလားးးးးး ကိုယ့်လူရေ့
အရိပ် မြင်ပါ့မလား မသိ :P
ကိုညီလင်းဆက်ပြောတာတွေ သိပ်မှန်လွန်းနေတော့ ဘာပြန်ပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး။ ရေးထားတာ သိပ်ကောင်းတယ်။ ထိချက်က ပက်စက်တယ်။ လဒ်ပေးလဒ်ယူ အားမပေးဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုလည်း သိပ်ကြိုက်တယ်။
လူတိုင်းမိုးခါးရေ သောက်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးကိုး။
Scenarioတွေ ဆက်ရန်ပေါင်း များစွာရှိသေးတယ်း)
လေးစားတယ်.. စာလုံးတွေက ရဲရင့်လို့
right.....right....pls be continue ......i want to read just like true thing.....
ထိတာမထိတာ ထိချင်ယောင်ဆောင်တာမဆောင်တာ သူတို့အပိုင်း Scenario အသစ်တွေထပ်ရေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။
Loved every single word....!
ကျနော်တို့တွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေမှန်တွေပါပဲ။ ကိုညီလင်းဆက် တင်ပြပုံက ကောင်းလွန်းလို့ တွေးတတ်လိုက်တာ၊ ရေးတတ်လိုက်တာလို့ ချီးကျူးမိပါတယ်။ တကယ့်ကို CJ ကောင်းတစ်ယောက် ပီသပါပေတယ်ခင်ဗျာ။ နောက်ထပ်လည်း တင်ပြ ပေးပါဦး။ ကိုညီလင်းဆက်ရဲ့ ပို့စ် အသစ်တွေကို အမြဲ စောင့်ဖတ်နေဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Website ကိုမကြာခဏ ဆိုသလို ရောက်ပါတယ်... အခု ပို့စ် မှာလည်း တချို့ ကိုလက်ခံ ပြီးတော့ တချို့ Scenario တွေအပေါ် မှာတော့ မတူတဲ အမြင့် ရှိပါတယ်... ဥပမာ မော်တော်ကား ကြောင့် ရေစင်သွားတာမျိုး...တနိုင်ငံလုံ အနေအထား နဲ့ ချိုင့်ခွက် မရှိတဲ့ လမ်းတွေ ပဲ ရှိနေရ မယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး..တချို့ နိုင်ငံ ရဲ ယာဉ်စည်းမျဉ်း ကိုက ရေအိုင် ရှိလျှင် လမ်းလျှောက်သူ ကို မစင် အောင် အရှိန် လျှော့ မောင်းရ မယ်ဆို တာ ပါပြီးသားပါ။ တပ်ကြပ် ကို သတင်း မပေးမိတာမျိုး.. တပ်ကြပ်က တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာပါ... အစကတည်းက သတင်းပို့မိရင် ဒီလိုတွေ့ကြုံရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အနှစ်ကတော့ ကြက်ဥ နဲ့ ကြက်လိုပါပဲ.. ပြည်သူတွေ မှာလည်း..ပြည်သူ့ နီတိ တွေ ယုတ်လျှော့နေပါ ပြီ။ ကျွန်တော့တိုင်းပြည်ပါပဲ..သို့သော် နလံ ထူဖို့ တော်တော်ခက်သွားပါပြီ။
ခံစားရတာတွေရေး ထားတာ လေးစားပါတယ်ရှင်။ စနစ်က တနေ့ ထက်တနေ့ ပိုဆိုးလာတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ ခံယူချက်တွေက ယိမ်းယိုင်ကုန်လာရော.. ငွေကြေးလိုအပ်ချက်က ထိပ်ဆုံးမှာ.. (ငွေမရှိရင်.. ပညာမတတ်။
ငွေမရှိရင်.. အမှု့ ဖြစ်ရင်ရှုံး။ ငွေမရှိရင်..နေမကောင်းရင်သေ။ ကိုယ့် ဒူးကိုချွန်ဖို့ ကအတော်မလွယ်။ ငွေမရှိရင်.. ငွေမရှိရင်.. ငွေမရှိရင်.. ) စနစ်ဆိုးကြီး လုံးဝပျက်သွားရင်.. စနစ်ကောင်းရောက်လာမလား။ ကိုင်းဒါဆိုရင် အချိန်တိုအတွင်းမှာ..မြန်မြန်ပျက်သွားအောင်.. ရောဖျက်လိုက်ရရင်ကောင်းမလား။ အဟီး။
ဆိုတာ လူတိုင်း သိကြပါတယ်လေ၊
တစ်ခုပဲသဘောမတူတာလေးဖတ်မိလို့ . "ကလေးတွေဟာ နောင်တစ်ခေတ်ရဲ့ ခောင်းဆောင်တွေဆိုပြီး မြန်မာတွေက ပင့်ထားလေတော့ .."ဆိုတာက မြန်မာတင်မဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာလဲ children are our future ဆို ပြီး ဒီလိုပဲ တင်စားကြပါတယ်။ဒါပေမယ့် အဲဒိနိုင်ငံတွေမှာတော့ကျောင်းချိန် မှာ ယာဉ်ကြောလုံးဝမပိတ်ပါဘူး။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ကျောင်းဝင်ခွင့် ရဖို့ က အဲဒိကျောင်းရဲ့ အနီးမှာ ကန့် သတ်မိုင်အတွင်းမှာပဲ နေတဲ့residence စစ်စစ်မှ သာ ၀င်ခွင့်ရလို့ ပါ။ ရန်ကုန်မှာကျတော့ ဒဂုံ ၁ လိုကျောင်းမျိုး၊တီတီစီလို ကျောင်းမျိုး ကို ၈ မိုင် ၉မိုင် အင်းစိန် ရန်ကင်း တွေက လဲလာတတ်ကျတာမျိုးကိုးဗျ။ စနစ်နဲ့ ပဲဆိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကလေးတွေကတော့ အနာဂတ်အစစ်ပါ။ တွေးမိတာပြောတာနော်။ ဒါမျိုး ပို့ စ်လေးတွေ ဖတ်ချင်ပါသေးတယ်။
ညီလင်းဆက်ဆိုတာ နအဖအတွက် ပဲဘက်လိုက်ရေးနေတာလို့ထင်နေတာ
အသိမှတ်ပြုရပါတယ် ဘာကြောင့် ဒါတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကို ပိုလေ့လာနိုင်၇င် စစ်အုပ်စုအကြောင်းကွင်းကွင်းကွက်ကွက် မြင်လာပါလိမ့်မယ် စစ်အုပ်စုအုပ်ချုပ်နေသရွေတော့